Akụkọ - Ejiri okpukpu nke ụlọ ọtụtụ ụlọ na Shenzhen ụgbọ elu dị n'okpuru
Ọkpụkpụ nchara nke ụlọ nhazi ụlọ (No.7) na Shenzhen Airlines Headquarter-Guangdong Honghua Construction Co., Ltd, ma ọ bụ Honghua, bụ ọrụ maka mmepụta na ntinye. Daalụ Shenzhen ụgbọ elu na Hunan Construction ọzọ.
Singlelọ nwere otu okpukpu na-ewu ụlọ nwere naanị ala ụlọ. Lee Single-storey ụlọ definition maka ozi ndị ọzọ. Lọ nke nwere ọtụtụ ụlọ na-arụ ọrụ nke nwere ọtụtụ ụlọ, ma na-enwekarị mgbasa ozi dị larịị n'ụdị rampi, steepụ na mbuli elu.
Otu uru kasịnụ e wulitere ụlọ nwere ọtụtụ ụlọ nwere bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke ebe obibi, ọbụna okpukpu atọ (dabere na ọnụ ọgụgụ ala ụlọ) ma e jiri ya tụnyere otu ụlọ elu nwere otu ụlọ. Na mgbakwunye, site na mkpebi iwulite elu ị nwere ike ịbawanye na mbara èzí gị site na ịghara iwu ụlọ sara mbara iji nweta ezigbo ebe obibi.
Otutu ulo nwere otutu ulo n’enye ulo nke kacha mma. Maka otu, n'ọtụtụ ọnọdụ enwere nkewa n'etiti ebe ihi ụra na ebe obibi ndị ọzọ dịka ọtụtụ ime ụlọ na-adịkarị n'elu ebe ebe dịka kichin, ime ụlọ erimeri, na ime ụlọ na-adị ala. Ya mere, o yikarịrị ka ị ga-enwe nsogbu mgbe ị na-ehi ụra. Ọzọkwa, ụlọ ndị nwere ọtụtụ ụlọ na-enyekarị nhọrọ ndị ọzọ gbasara nhazi na imewe.